Shirqoolka Farmaajo u dhigay RW Rooble | KEYDMEDIA ONLINE
Shirqoolka Farmaajo u dhigay RW Rooble
Farmaajo ayaa adeegsadey xeelado badan uu kursiga kusii fadhiyo, isagoo markasta abuurayay kilaaf iyo mid xiisad colaadeed oo xalintooda waqtiga ku luminayay tan iyo markii uu mudo-xileedkiisii dhamaadey Feb 8, 2021.
MUQDISHO, Soomaaliya - Khilaafka Farmaajo iyo RW Rooble ayaa faraha ka baxay, islamarkaana gaarey heer aan soo noqon lahayn, kadib markii waan-waantii socotay ay burburtay.
Fashilka wuxuu ahaa mid horey uga soo shaqeeyay Xafiiska Farmaajo, sida Keydmedia xogaha ku helayso, iyadoo ujeedka uu yahay in waqtiga laga lumiyo doorashadda oo Rooble mas'uulka ka yahay.
Waxay Kooxda Farmaajo habeen iyo maalin maleegayeen in aan wax heshiis ah la gaarin, waxaana taasi caddeyn u ah inuu Madaxweynaha waqtiga ka dhamaadey uu diiday tanaasul inuu sameeyo, iyadoo uu keenay shuruudo culus oo Rooble u cuntami waayay, caqligana diidayo.
Wuxuu dalbadey in Rooble ka noqdo magacaabista taliyaha NISA Bashiir Goobe iyo Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur iyo in Kiiska dilka Ikraan lagu dhameeyo xeer jajab iyo diyo.
Madaxweynaha Galmudug Axmed Kaariye Qoor-Qoor oo mudo ku howlanaa sidii lagu xalin lahaa khilaafka labada dhinac, isagoo kaashanayana Mursal ayaa gacanta ka taagtay dhex-dhexaadintooda kadib markii uu dhinac walba ku adkaystay mowqifkiisa, islamarkaana la waayay qof tanaasul sameeya.
Shirqoolka Farmaajo ayaa ah inuu Rooble ku fashilmo doorashadda iyo Kiiska Ikraan Tahliil, taasoo aad u dhaawacaysa sumcadiisa iyo taageeradda uu ka haystay shacabka ee ku aadanayd ka shaqeynta sidii dalka uga bixi lahaa si nabdoon xaaladda kala-guurka.
Farmaajo wuxuu aaminsan yahay inuu weli yahay Madaxweynaha dalka, oo talada isaga ka go'do, wuxuuna ka dagaalamayaa inay awoodda gacantiisa ka baxdo, oo Rooble uga adkaado dagaalka siyaasadeed. Farmaajo ayaanan doonaynin in NISA ay gacantiisa ka baxdo, maadaama ay tahay meesha taalla xogtiisa iyo hay'adda kaliya isku difaaco.
Mar hadii heshiis la gaari waayay, oo rajadii waan-waanta noqotay hal bacaad lagu lisay, waxa kaliya ee la filanayo ayaa ah in Farmaajo uu NISA u magacaabo taliye cusub, oo laga dhigayo nin lagu magacaabo C/risaaq Maxamuud Xaaji, oo reer Hiiraan ah.
Ninkan ayaa qaba naag u dhalatay Eritrea, wuxuuna ahaa shaqsiga diiwaan-gelinta, daadgureynta iyo ka warqabka dhalinyaradii loo qaadey Asmara, wuxuuna sidoo kale ahaa ninka u dhaxeeya Fahad Yaasiin iyo Afwerki, Madaxweynaha Eritrea.
Mar hadii ninkan la wareego NISA, waxaa dhiman doono Kiiska Ikraan Tahliil, oo ka billowday Nabad Sugida, kuna dhamaadey. Farmaajo geed gaaban iyo geed gaaban wuxuu u korey sidii Fahad uga badbaadin lahaa Maxkamad in lasoo taago.